Tsy misy Mai Tai, tsy misy Vodka rehefa nanenjika ny tafika an'habakabaka rosiana 22 kilaometatra miala an'i Hawaii i American F300 Raptor Fighter Jets
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Tsy misy Mai Tai, tsy misy Vodka rehefa nanenjika ny tafika an'habakabaka rosiana 22 kilaometatra miala an'i Hawaii i American F300 Raptor Fighter Jets
Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Tsiambaratelo momba ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Nihorakoraka nanerana an'i Pasifika ny fiaramanidina mpiadin'i Raptor
Jetsika telo an'ny US F-22 Raptor no nampitaina tamin'ny Alahady 13 Jona 2021, nanerana ny Oseana Pasifika. Nalefa avy tao amin'ny Base Air Force Hickam ao Hawaii ireo fiaramanidina ireo mba hampitahorana ireo mpiady rosiana hiala ny sisin-dranomasin'i Etazonia Hawaii.
Ny US Airforce dia manana fiaramanidina mpiady F-22 Raptor. Izy io dia fiaramanidina taranaka fahadimy izay, hatreto, no raisina ho mpiady halatra tsara indrindra eto an-tany.
Ity variant ity dia nametraka ny fototra ho an'ny sidina hafa mitovy aminy, miaraka am-boalohany ho an'ny tenany:
Ny F-22 no voalohany nampahafantatra ny fahitana radara ambany, ny fitsangantsanganana an-tsokosoko, ny fihoaram-pefy ary ny tambajotran-tsivana mandroso. Ny F-22 koa dia nanana fahaiza-manao ady tsy an-kiato, na dia tsy nanana fahaiza-manao marobe aza ny fiaramanidina mpiady vao haingana.
Ny fotoana farany niasan'ity fiaramanidina ity dia tany Hawaii tamin'ny 13 Jona tamin'ity taona ity namaly ny fihantsiana Rosiana 300 kilaometatra miala ny Waikiki Beach.
Ny F-22 Raptor no fiaramanidina mpiady farany an'ny Air Force. Ny fampifangaroana ny halatra, fitsangantsanganana an-tsokosoko, fivezivezena, ary avionika mitambatra, ampiarahana amin'ny fanatsarana ny fanohanana, dia maneho ny fiakarana haingana amin'ny fahaizan'ny ady.
Ny Raptor dia manao iraka an-habakabaka na an-habakabaka. Ny fandrosoana lehibe amin'ny famolavolana ny cockpit sy ny fusion sensor dia manatsara ny fahatsiarovan-tenan'ny mpanamory. Ao amin'ny fanamafisam-peo-amin'ny-rivotra, ny Raptor dia mitondra AMRAAM enina AIM-120 sy sidewinders roa AIM-9.
Ny F-22 dia mitondra mangalatra amin'ny andro, ahafahany miaro tena fa tsy fananana hafa. Ny motera F-22 dia mamokatra tosika betsaka kokoa noho ny maotera mpiady ankehitriny.
Ny fampifangaroana ny famolavolana aerodynamika marefo sy ny fampitomboana ny tosika dia mamela ny F-22 hitsangantsangana amin'ny seranam-piaramanidina supersonic (lehibe kokoa noho ny 1.5 Mach) nefa tsy mampiasa afterburner - toetra iray antsoina hoe supercruise.
Ny fanondroana ny fiaramanidina dia ny F / A-22 nandritra ny fotoana fohy talohan'ny nanovana azy hoe F-22A tamin'ny Desambra 2005.
Nohamafisin'ny manamboninahitra amerikana fa nikorontana ny alahady 22 jona lasa teo ny F-13 ho setrin'ny fanapoahana baomba ataon'ny Rosiana manakaiky ny habakabaka amerikanina. Na dia tsy niditra tao amin'ny United Air Air Space tany Hawaii aza ny fiaramanidina mpiady rosiana. Niverina tany amin'ny base ny jet amerikana taty aoriana.
Tamin'ny voalohany dia voalaza fa ny valin'ny miaramila dia avy amin'ny fangatahan'ny Federal Aviation Administration (FAA) mba hanao “fisafoana an'habakabaka tsy ara-dalàna.”
Tamin'ny 13 Jona, Raptors 2 no natomboky ny baiko india-pasifika tao amin'ny Camp HM Smith ho an'ny kaomandy ambaniny, Pacific Air Forces, 154 Fighter Wing, avy any Hickam ao amin'ny nosy Oahu tokony ho tamin'ny 4 ora hariva narahin'ny Raptor fahatelo adiny iray taty aoriana. Toa nisy KC-00 Stratotanker - fiaramanidina iray nameno solika - koa nampiasaina tamin'ity iraka ity, nanondro ny zava-misy fa mety mila fanampiana fanampiana refuel ny fiaramanidina iray.
Ny olana, izay tsy navoakan'ny maso ivoho, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, na ny solontenan'ny miaramila tamin'ny antsipiriany, ary niverina tany amin'ny tobin'ny Hickam Airforce ao amin'ny Nosy Oahu ireo 3 Raptors sy ny KC-125 Stratotanker.
Rehefa nanontaniana izy dia nilaza fotsiny ny mpitondra tenin'ny FAA Ian Gregor fa: "Manana fifandraisana akaiky amin'ny miaramila izahay." Ny tafika an'habakabaka dia manana F-22, mpanamory fiaramanidina, mpiambina ary mpiasan'ny fitaovam-piadiana miantso 24 ora isan'andro ao Hickam hamaly ny fandrahonana an'habakabaka amin'ireo nosy Hawaii ao anatin'ny iraka fanairana fiarovan-tena.
Andro vitsy taty aoriana dia nivoaka ny marina rehefa ny motera fikarohana lehibe mifono mistery dia namafa ny fanontaniany tamin'ny lahatsoratra momba ity tranga ity.
Ny tena zava-nitranga dia i Russia no nanao fampihetseham-batana lehibe indrindra tany amin'ny Oseana Pasifika hatramin'ny Ady Lehibe Faharoa - angamba hanokatra ny tany amin'ny fihaonana Biden-Putin any Genève. 300 ka hatramin'ny 500 kilaometatra miala ny morontsiraky ny masoandro any Hawaii no natao.
Herinandro talohan'io dia nitifitra fiaramanidina mpiady MiG-31 i Russia mba hiaraka amin'ny fiaramanidina amerikana eo ambonin'ny Barents, nitateran'ny masoivohom-baovao RIA ny filazany ny tafika an-dranomasina Rosiana.
Nilaza ny tafika rosiana fa ny fiaramanidina amerikana dia fantatra fa fiaramanidina P-8A Poseidon ary niverina tamin'ny toerany ny fiaramanidina mpiady rosiana raha vantany vao nanao fihodinana U ary nisintona ny sisintanin'i Rosiana ny fiaramanidina amerikana, hoy ny RIA.
Ny Ranomasina Barents dia ranomasina an-tsisin'ny Ranomasina Arktika, atsimon'ny morontsiraka avaratr'i Norvezy sy Russia ary mizara roa ny rano terrain'ny norvezy sy rosiana,
Tamin'ny taona 2017, ny FAA dia nangataka sidina fanampiana avy any Hickam, tamin'izay fotoana izay dia 2 F-22 no nalefa hanaraka ny sidina American Airlines avy any California noho ny mpandeha iray nanandrana nanery ny lalany ho eo alohan'ny fiaramanidina. Notazomin'ny FBI tany am-ponja ny mpandeha rehefa tonga.
Ny Wing faha-154 dia ampahany amin'ny Hawaii Air National Guard fa miasa mavitrika amin'ny Air Force ary manome ny ankamaroan'ny fiarovana ny nosy. Manana mpanamory fiaramanidina F-22 miantso 24 ora isan'andro ao Hickam izy hamaly haingana ny fandrahonana mety hitranga amin'ireo nosy Hawaii.
Maro ny tobin'ny fiaramanidina miaramila manerana ny faritra Pasifika tato ho ato izay nampitombo ny tempo fampiofanana sy fiasan'izy ireo. Ny Air Force dia nanomboka nanaparitaka ny fiaramanidiny manodidina ny Pasifika tamin'ny sidina matetika nankany amin'ny seranam-piaramanidina namakivaky ireo nosy lavitra.